ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီက ချင်းပြည်နယ်တွင် ပါတီရုံး ခွဲများ ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင် |
« ချင်းပြည်နယ် အခြေစိုက် နအဖစစ်တပ်အတွင်း ကလေးစစ် သား အသုံးပြုမှုရှိနေ
အတောင်မစုံမီ ပျံသန်းနေကြတဲ့ ငှက်ငယ်များ »
ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီက ချင်းပြည်နယ်တွင် ပါတီရုံး ခွဲများ ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်
၈ ဇွန်လ ၂၀၁၀၊ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ (ယူဒီပီ) အဖွဲ.က မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသမြို.နယ်တချိူ.တွင်မြို.နယ် ပါတီရုံးခွဲများဖွင့် လှစ်ရန်အတွက် ပြင် ဆင်နေသည်ဟု သိရသည်။
ဦးရွှေအုန်းဦးဆောင်သည့် ယူဒီပီ ပါတီမှ ချင်းပြည်နယ်တာဝန်ခံခေါင်းဆောင်တချိူ.သည် ယခုလဆန်းပိုင်းက ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပတူပီ၊ မင်းတပ်၊ ကန်ပက်လက် မြို.နယ်များသို. သွားရောက်ပြီး မြို.နယ်ပါတီရုံးများ ထူထောင်ရန်လုပ် ဆောင်နေကြသည်ဟုသိသည်။
“မတူမီမြို.မှာတော့ ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရောက်လာပြီ၊ အခု သူတို.ရုံးခန်းအတွက် အိမ်ငှါးဖို.ပြင်ဆင်နေကြတယ်” ဟု မတူပီမြို.ခံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တဦးက ပြောသည်။
ယူဒီပီပါတီ၏ ချင်းပြည်နယ်တာဝန်ခံ ခေါင်းဆောင်များမှာ ဦး ရွေထန်းနှင့် ဆလိုင်းအောင်ထန်း၊ ဦး ဗန်နှင်းတို.ဖြစ်ကြသည် ဟုသိရသည်။
ဦးရွေထန်းသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် မတူပီမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူဖြစ်ပြီး ဆလိုင်းအောင်ထန်းသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ချင်းပြည်နယ် ခရီးစဉ်နှင့်ပါတ်သက်လျက် နအဖမှဖမ်းဆီးပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒါဏ် ကျခံခဲ့ဘူးသူ ဖြစ်သည်။
ဦးဗန်နှင်းသည် Mara Evangelical Church မှ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တဦး ဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်သူ ပလက်ဝ ဒေသခံတဦးဖြစ်သည်။
၄င်းတို.အနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွင် ပါတီရုံးခွဲများထူထောင်ပြီးပါက ချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်းသို. ဆက်သွားပြီး ရုံးကိစ္စ အတွက်လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယူဒီပီပါတီအနေဖြစ့် ယခုနှစ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်သုံးရပ်စလုံး၌၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟုသိရပါ သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်နှင့် ဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်လျောက်ထားသည့်ပါတီ စုစုပေါင်း ၄၂ ပါတီ ရှိပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျောက်ထားသည့်ပါတီ ၃၂ ပါတီအနက် ၂၉ ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအာဘော်မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။